रीना मोक्तान - कान्तिपुर समाचार
मोक्तान इकान्तिपुरमा कार्यरत छिन् । उनी मनोरञ्जन, कलाशैली लगायत समसामयिक विषयमा लेख्न रुची राख्छिन् ।
रीना मोक्तानका लेखहरु :
दक्षिण भारतीय फिल्म ‘केजीएफ च्याप्टर २’ ले नेपाली हलमा रातभर हंगामा मच्चाएको धेरै भएको छैन । ‘आरआरआर’ ले पनि नेपाली बक्स अफिसमा राम्रो कमाइ गर्‍यो । विदेशी मात्रै होइन, नेपाली फिल्मले पनि हाउसफुल दर्शक पाउँछन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, ‘कबड्डी ४’ । फिल्मका निर्देशक रामबाबु गुरुङ र वितरक गोविन्द शाहीको दाबी मान्ने हो भने फिल्मले पहिलो दिन सबैभन्दा ठूलो व्यापार गर्ने रेकर्ड बनाएको छ ।
न्याय प्राप्तिमा 'हदम्याद' बाधक
'यो कस्तो नियम हो नेपालको? एक वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइल नै लिइँदैन रे कोर्टले । मेरो आशा हराउँदै गएको छ । के तपाईंहरुले माल्भिकाको क्षमायाचना हेर्नुभयो,' बलात्कारमा परेकी युवतीले बिहीबार राति सुसी खान जाने हो नामको टिकटक अकाउन्टबाट भक्कानिँदै भनिन् ।
सौन्दर्य प्रतियोगितामा आयोजकबाट 'यौन दुर्व्यवहार': आठ वर्षपछि युवतीले सार्वजनिक गरिन् पीडा
सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत एक युवतीले आफू १६ वर्षको हुँदा सौन्दर्य प्रतियोगिताका एक आयोजकले आफूसँग गरेको यौन दुर्व्यवहारबारे बोलेकी छन् । सन् २०१४ को सौन्दर्य प्रतियोगिता 'मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल 'मा भाग लिन लगाउँदै आयोजकले आफूलाई ६ महिनासम्म ‍यौन दुर्व्यवहार गरेको कुरा भिडियोमार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् ।
कीर्तिपुरवासीलाई कस्तो लाग्दैछ चुनाव ?
मेलम्चीको पानीले कीर्तिपुरवासी अस्तव्यस्त देखिन्छन् । खबर नगरि आएको मेलम्चीलाई संगालेर राख्न कीर्तिपुरवासी हतारिँदैछन् । कतिका अनुहारमा खुसीले उज्यालो देखिन्छ भने कसैलाई खासै उत्साह छैन। हप्ताको २ पटक मात्र पानी आउने कीर्तिपुरमा यसरी मेलम्ची उर्लिएपछि ‍पानी जोगाउने चक्करमा कीर्तिपुरवासीले आकाशबाट झरेको पानीलाई पनि बेवास्ता गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुले जनताको घरदैलो पुग्ने कार्यक्रम तीव्र बनाइसकेका छन् । बुधबार नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, ११ वडाका अध्यक्ष उम्मेदवार हिरालाल तन्डुकार चुनावी ‍टोलीसहित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती पस्यो । विगतका उम्मेदवारले झैं उनीहरुले पनि लालपुर्जा, नागरिकता र खानेपानी व्यवस्थापनबारे आश्वासन बाँडेर फर्के । सुकुम्बासी बस्तीका लागि दलहरुबाट पाउने यी आश्वासन नौलो कदापी होइन ।
'तिमी किन एक्लै बसेको, मजस्तै कसैलाई कुरिबसेको त होइन नि?' सामान्य भलाकुसारीमै हजुरआमा गम्भीर प्रश्न गर्छिन् । 'होइन, हजुरआमा,'पुस्तक खोज्दै गरेका दृश्यले जवाफ फर्काउँछ,'गाउँ नगएको धेरै भयो ।' 'घर जाँदै गर्नु, घरले पर्खिन्छ…' चर्खामा धागो मिलाउँदै हजुरआमा बोल्छिन् ।
'एमालेले युवाको प्रतिनिधित्व गर्न मलाई उम्मेदवार बनाएको हो' [भिडियो]
वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि सुनिता डंगोल नेकपा एमालेबाट उपमेयरको उम्मेदवार हुन् । स्वतन्त्रतर्फ मेयरमा उठ्ने घोषणा गरेसँगै डंगोल चर्चामा आएकी थिइन् । मिस नेवा २०११ समेत रहेकी डंगोललाई एमालेले उपमेयरमा उठाउने निर्णय गरेसँगै उनले त्यसलाई सहर्ष स्विकारिन् ।
मंगलबार चलचित्र विकास बोर्डले हिन्दी डब फिल्मको प्रदर्शन रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्‍यो । नेपाली फिल्म हिन्दी डब फिल्मको चपेटामा पर्‍यो भन्ने फिल्मकर्मीले गुनासो पोख्न थालेपछि बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालले हिन्दी डब फिल्मको प्रदर्शन नै रोक्नका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन् । नेपाली फिल्मकर्मीकै पक्षमा देखिए पनि यो निर्णयले के नेपाली फिल्मको सोमा 'आरआरआर'मा झैं दर्शक ओइर्‍याउला त ? हिन्दी डबको मारमा परेकाहरूले के विदेशी फिल्मकै जस्तो स्तरमा नेपाली फिल्म बनाउलान् ?
सर्वाधिक फिल्मको आवेदन ओइरिँदा योपटक आयोजक टिम आश्चर्यमा परेको छ । बिहीबारदेखि सुरु हुने १३ औं फिल्म साउथ एसियामा यो वर्ष अनपेक्षित रूपमा फिल्मको बाढी आएको छ । यसअघिका महोत्सवहरूमा बढीमा १ हजार ४ सय वटासम्मको आवेदन आउँथ्यो । महोत्सवले २५ औं वर्षको उत्सव मनाइरहँदा ३ हजार ५ सय फिल्मको आवेदन पर्‍यो । तिनैमध्येबाट यो वर्षको महोत्सवका लागि ८ देशका उत्कृष्ट ७१ फिल्महरू छनोटमा परेका छन् । चारदिने महोत्सवमा देखाइने डकुमेन्ट्रीमार्फत दर्शकले दक्षिण एसियालाई हेर्ने र बुझ्ने अवसर पाउनेछन् ।